हालसम्म नेपालमा कति खोप आयो, कतिले लगाए ? - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
हालसम्म नेपालमा कति खोप आयो, कतिले लगाए ?
काठमाडौँ — हालसम्म नेपालमा १ करोड ७८ लाख ५८ हजार ७१० मात्रा खोप आएको छ । सरकारले कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, अस्ट्राजेनिकाको खोप दिइरहेको छ ।
कोभिसिल्ड २४ लाख ४८ हजार डोज, अस्ट्राजेनिका १९ लाख ७५ हजार ८६०, जोन्सन एन्ड जोन्सन १५ लाख ३४ हजार ८५० र भेरोसेल १ करोड १९ लाख डोज खोप आएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनिकाको खोप पहिलो मात्रा २७ लाख २७ हजार २६५ जनाले लगाएका छन् दोस्रो मात्रा १५ लाख १८ हजार ५ जनाले लगाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी भेरोसेलको पहिलो मात्रा ४४ लाख ८७ हजार ४७७ जनाले लगाइसकेका छन् भने दोस्रो मात्रा ३२ लाख २७ हजार ५६४ जनाले लगाएका छन् । जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप १४ लाख ९२ हजार ४३२ जनाले लगाइसकेका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ १७:३८
सरकारद्वारा जहाज र हेलिकोप्टरको अवस्थाको अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौँ — सरकारले हवाईजहाज/हेलिकोप्टरको भौतिक, यान्त्रिक र अभिलेखीय अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक भेषराज सुवेदी, वरिष्ठ क्याप्टेन कृष्णबहादुर पौडेल क्षेत्री, मन्त्रालयको सीएटीसीअ प्रमोद नेपाल सदस्य रहेका छन् । उड्ड्ययन प्राधिकरणका प्रबन्धक लक्ष्मण देवकोटा सदस्य सचिव रहेका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ १७:२४